China technical parameter ye Hydraulic yekudhinda akamedura ne E21 125T / 2500 mm Kugadzira uye Fekitori | BiGa
Technical paramende yeHydraulic yekudhindisa bhureki ine E21 125T / 2500 mm
Muchina wese uri mune jira ndiro rakasungwa chimiro, yakazara welded furemu, ine zvemukati kushushikana zvabviswa ne vibration kuchembera tekinoroji, yakakwira simba uye yakanaka kuomarara kwemuchina. Kaviri hydraulic mafuta humburumbira inoiswa yekumusoro kutapurirana, yakapihwa neanogumira muganho yekumisa uye synchronous torsion bar, yakafanana yekugadzikana uye yakavimbika mashandiro, pamwe neepamusoro kunyatsoita.
• Muchina wese uri mune jira ndiro rakasungwa chimiro, yakazara welded furemu, ine zvemukati kushushikana zvabviswa ne vibration kuchembera tekinoroji, yakakwira simba uye yakanaka kuomarara kwemuchina.
• Kaviri hydraulic mafuta humburumbira inoiswa yekumusoro kutapurirana, yakapihwa neanogumira muganho yekumisa uye synchronous torsion bar, yakafanana yekugadzikana uye yakavimbika mashandiro, pamwe neepamusoro kunyatsoita.
• Kudzora kwemagetsi uye manyorerwo enzira yakanaka anoteerwa kure kure nekumira kwekumberi uye nekurova kwechavhara, uye yakagadzirirwa dhizaini yekuratidzira, iri nyore uye inokurumidza kushandiswa.
• Slider sitiroko yekugadzirisa mudziyo uye neshure geji chishandiso: yemagetsi nekukurumidza kugadzirisa, bhuku diki kugadzirisa, kuratidza kwedhijitari, nyore uye nekukurumidza mukushandisa.
• Muchina une inch, isina, inoenderera nzira maratidziro, commutation, kugara nguva inogona kudzorwa nenguva relay.
• Kusevha kwekuchengetedza, gonhi-rakavhurika simba -off mudziyo
• Mechanical synchrony torsion bar, kuchengetedza iyo yekuruboshwe-kurudyi muyero kufamba.
• Mechanical wedge yakasarudzika muripo chimiro.
• Japan NOK yepakutanga kupinza tenzi humburumbira zvisimbiso.
Maitiro Ekuchengetedza (2006/42 / EC):
4.Front chigunwe Protection (Safety chiedza keteni)
5. South Korea Kacon tsoka chinja (Chikamu 4 chekuchengeteka)
6.Back simbi yakachengeteka fenzi ine CE standard
Hydraulic system inobva kuBosch -Rexroth, Germany.
Kana oiri ichibuda mupombi, nzira yese kupinda muchisviniro chekutanga inomanikidza jira zvinhu, uye imwe nzira yekufambisa nguva inodzora kunonoka kupinda mukamuri yepamusoro yekuruboshwe kwemasekondi maviri. Mafuta ari musilinda yepasi yesirinda rekuruboshwe anomanikidzwa kupinda mukamuri yepamusoro yekumusoro nekamuri rerudyi repazasi. Oiri kudzokera kutangi. Kurohwa kwekudzoka kunodzoserwa neiyo solenoid vharafu
Estun E21 Mutungamiriri
• Nhamba, imwe peji kuronga
• Yemukati nguva relay
Iyo technical paramende:
Bend max kureba kweplate mm
Matanda daro mm
Slipper sitiroko mm
Max yekuvhura kukwirira mm
Huro kudzika mm
Tafura Upamhi mm
Kushanda Kureba mm
X Akabatana Speed mm / s
Kushanda Speed mm / s
Dzosera Speed mm / s
SKF, NSK, FAG kana INA
Mberi Uye Back Dziviriro Fence
Pashure: yepakati kumhanya EDM waya yekucheka muchina
Zvadaro: Technical paramende ye Hydraulic yekucheka muchina 6x3200MM ine E21
Hydraulic wokudhinda akamedura
Magetsi SERVO CNC PRESS akamedura
HYDRAULIC NC KUDZIDZISA BHUKU
Gantry Surface Kukuya Machine, Gantry Imwe-Yekupedzisira Surface Kukuya Machine, Gantry Yakapetwa Musoro Wepamusoro Kugaya Machine, Gantry Double-End Surface Grinding Machine, Gantry Imwe Musoro Wepamusoro Pamusoro Kugaya Muchina, Gantry Rudzi rwepamusoro Kugaya Machine,